RW Cumar: Halala dagaalo kuwa burburinaya nolosha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
28th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey weerarkii Akshabaab ku qaadeen Hotel Maka-Al-Mukarama iyo khasaaraha ka dhashay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in weerarkaas lagu dilay 14 qof, oo toban ka mid ah ay ahaayeen dad shacab ah, ayna ku dhaawacmeen 13 qof. “Dowlada Imaaraatka Carabtuna xiriir ay la soo samaysay xukuumadda ay ka balan-qaaday iney gar-gaar caafimaad u fidinayso dadka dhaawacoodu daran yahay” ayuu yiri Cumar.
Ra’iisul Wasaare Cumar ayaa ku sifeeyey weerarada noocaan ah ineysan raad ku lehayn diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida, isla markaan looga dan leeyahay in lagu gumaado dad aan waxba galabsan.
“Waxaan halkaan ka sheegayaa sida aan ula murugey-sanahay qoysaska dadkoodu ku dhinteen, waxaana ogahay xanuunka ay arintaan leedahay, waxaana halkaan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa qoysaska, ehelka iyo dhamaan asxaabta dadkoodii uga geeriyoodeen weerarka argagaxiso, Waxaana si khaas ah tacsi ugu dirayaa qoysaskii ay ka baxeen Marxuum Yusuf Ismaciil Bari-bari oo ahaa safiir shaqo muhiim ah u hayey shacabka Soomaaliyeed iyo Marxuumad Farxiyo Bashir Nuur oo ahayd aqoonyahanad dalka u timid iney ku biiriso aqoonteeda. Waxaana Ilaahay uga baryayaa inuu siiyo caafimaad taam ah dadkii ku dhaawacmay” ayuu yiri RW Cumar
“Waa inaan shacab iyo dowladba u istaagnaa sidii aan uga shaqayn lahayn amniga, meelna uga soo wada jeesan lahayn kuwo doonaya inay damiyaan iftiinka horumarka, bur-burinta goobaha ganacsiga iyo beegsiga dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan.”, sidaa waxaa yiri Cumar C/rashiid.
“Waxaan halkaan amaan uga soo jeedinayaa laamaha amnigu talaabadii geesinimada lahayd ee ay ku soo bad badiyeen dad faro badan oo ku xanibnaa gudaha Hotelka, waxana ku boorinayaa laamaha amniga iney muujiyaan feejignaan dheeraad ah, si shacabka looga bad baadiyo kooxaha doonaya iney dhibaateeyaan” ayuu yiri RW Cumar.
Ugu danbayntii, RW ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iney u midoobaan dagaalka ka dhanka ah Akshabaab, oo caado ka dhigtay xasuuqa dadka aan waxba galabsan, sida uu yir, islamarkaana doonaya iney si khasab ah dadka uga dhaadhicyaan fikirkooda u gaarka ah.